FTS 22 Apk Download Ho an'ny Android [Lalao baolina kitra] - Luso Gamer
Ny First Touch Soccer dia noheverina foana ary isaina ho isan'ny lalao baolina kitra an-tserasera be indrindra. Rehefa nandeha ny fotoana dia nisy dikan-teny samihafa navoakan'ny mpamorona. Androany isika dia miverina miaraka amin'ny dikan-tsarimihetsika manaraka antsoina hoe FTS 22 Apk.
Tsarovy eto fa manohana sy manolotra ny kinova farany ho fanomezana taom-baovao izahay. Hatramin'izao fotoana izao dia tsy azo tratrarina amin'ny fivarotana kilalao ny dikan-teny farany amin'ny fampiharana lalao. Na ireo magazay ofisialy aza tsy afaka manome izany.
Saingy eto amin'ny tranokalanay, dia nahomby izahay tamin'ny famoahana ny dikan-tsarimihetsika Android Lalao Mod. Ny lalao farany dia manolotra endri-javatra miavaka ao anatin'izany ny fanovana. Noho izany dia vonona ny hiaina ireo endri-javatra farany ireo ianao ary apetraho ny FTS 22 Mod.
Inona ny FTS 22 Apk
FTS 22 Apk dia fampiharana lalao fanatanjahantena baolina kitra an-tserasera tonga lafatra namboarin'ny mpamorona. Izay efa niasa sy nanana traikefa tsara tamin'ny famolavolana ny Dream League Soccer. Ny anton'ny fampivoarana ity lalao baolina kitra hafa ity dia ny hanomezana fanangonana tsara indrindra.
Noho izany dia tsy hahatsiaro ho leo mihitsy ny mpilalao rehefa milalao lalao mitovy amin'ny fotoana maharitra. Ankoatra ny fanolorana endri-javatra miavaka sy ny fomba filalaovana. Nifantoka tamin'ny sasany amin'ireo olana lehibe ihany koa ireo mpamorona ary ao anatin'ity dikan-teny ity dia voavaha avokoa ireo olana lehibe ireo.
Ny improvisation manan-danja indrindra natao tao anaty lalao dia ny Graphical Display. Ny ankamaroan'ny mpilalao dia mahatsapa ity olana lehibe ity amin'ny fitadiavana fampisehoana milamina. Na dia milaza aza ny mpamorona fa manatsara ny fampisehoana lalao.
Na izany aza, ny ankamaroan'ireo mpilalao ireo dia mety tsy afaka mahita ireo fanatsarana ireo. Na izany aza, nanamarina manokana ny fanatsarana izahay ary nahita fanavaozana ara-dalàna tao anatiny. Ka tianao ny mankafy ireo fanatsarana ara-dalàna ireo noho ny fametrahana FTS 22 Mod Liga Indonesia.
anarana FTS 22
Developer Avy amin'i GilaGame
Anaran'ny fonosana com.firsttouchgames2022.bygilagamev3
SOKAJY Games - Sports
Amin'ny ankapobeny dia manohana sy manolotra ny lalao modded izahay. Ao anatin'ny dikan-teny ofisialin'ny lalao dia mihidy avokoa ny endri-javatra lehibe rehetra ao anatin'izany ny maody filalaovana. Ary tsy azo tratrarina afa-tsy rehefa avy mampiasa vola tena izy.
Na dia angatahina aza ny mpilalao hampiasa vola tena izy amin'ny fividianana vola madinika volamena. Raha vantany vao nahomby ny mpilalao nanangona vola madinika volamena ampy. Avy eo izy ireo dia afaka manokatra ireo endri-javatra pro ao anaty lalao.
Toa lafo sy tsy takatry ny sain'ny mpankafy ny dingana ara-dalàna. Na ny mpilalao aza dia mahazo ireo vola madinika volamena mamita ny asa sy ny tanjona isam-bolana. Saingy toa mandany fotoana sy vola tokoa ilay dingana.
Noho izany, raha jerena ny fangatahan'ny mpilalao, eto izahay dia manohana ny dikan-teny modded. Izay tsy voahidy ny maody rehetra ary afaka mankafy ireo endri-javatra pro tsy misy farany maimaim-poana ny mpilalao. Tsarovy fa ny kaontera volamena dia havaozina isaky ny miditra.
Avy amin'ny fanaraha-maso ka hatramin'ny fampisehoana FTS dia hatsaraina ao anatin'ny lalao farany. Klioba 250 mahery sy mpilalao nofinofy no azo isafidianana. Ka tianao ilay lalao miaraka amin'ny namana sy mpikambana hafa. Avy eo apetraho ny Android FTS 22 Asia farany.
Ny lalao dia maimaim-poana alaina.
Ny fametrahana ny lalao dia manome traikefa amin'ny baolina kitra tena misy.
Klioba 250 mahery no azo isafidianana.
Ireo mpilalao nofinofy dia azo tratrarina ihany koa.
Ny kianja sy ny ekipa samihafa azo ovaina dia azo hatonina.
Tsy voahidy ny maody Star Player, Season ary Dream Team.
Tsy misy doka mivantana hita.
Ahoana ny fandefasana FTS 22 Apk OBB
Na dia tsy afaka mahita lalao amin'ny Play Store aza izahay. Midika izany fa ny mpampiasa Android dia mety tsy afaka misintona lalao amin'ny Play Store. Ka avy aiza ny mpankafy dia afaka misintona mora foana sy mankafy ny lalao nefa tsy manahy.
Raha sendra olana ianao amin'ny fitadiavana loharano tena izy. Avy eo dia manoro hevitra ireo mpilalao android ireo izahay hitsidika ny tranokalanay ary misintona lalao mora foana. Kitiho fotsiny ny rohy nomena ary ankafizo ny milalao FTS 22 Mod Liga Indonesia Apk.
Ahoana ny fametrahana sy filalaovana lalao
Voalohany dia angatahana ny mpilalao haka ny kinova farany amin'ny rakitra zip. Izany dia azo alaina avy amin'ny rohy eto ambany nomena. Rehefa vita soa aman-tsara ny rakitra zip. Esory izao ny rakitra zip alaina ary apetraho ny rakitra Apk.
Aorian'ny fametrahana ny rindranasa lalao dia adika izao ny rakitra OBB avy amin'ny lahatahiry nalaina. Ary avy eo ampidiro ao anatin'ny Android> OBB folder. Ny mpampiasa dia angatahana hanaraka ny dingana mitovy amin'ny Data Folder. Rehefa vita ny dingana dia tsidiho ny menio finday ary atombohy ny lalao.
Ny fampiharana lalao atolotray eto dia tena tany am-boalohany. Na dia nojerenay aza ny fisie fampiharana ao anatin'ny finday Android samihafa alohan'ny hanomezana azy ao anaty fizarana fampidinana. Noho izany ny mpankafy baolina kitra dia afaka mankafy ny lalao farany tsy manahy.
Betsaka ny fampiharana lalao baolina kitra hafa navoaka sy zaraina eto. Raha te hijery ireo rindranasa kilalao hafa mifandraika dia araho azafady ny URL. izay Nijery ekipa Soccer League 2022 Apk ary FM 22 Apk.
Raha tianao ny fomba filalaovana FTS ary mitady loharano an-tserasera. Raha hisintona maimaim-poana ny kinova mod tena izy amin'ny rakitra lalao. Avy eo ireo mpankafy ireo dia afaka miditra mora foana amin'ny FTS 22 Apk Data avy amin'ny tranokalanay amin'ny alàlan'ny safidy fisintonana iray.
Sokajy Sports, Games Tags FTS 22 Apk, FTS 22 Data Apk, FTS 22 Apk OBB, FTS 22 Mod, Lalao Mod Post Fikarohana